स्पेगेटी कार्बोनेरा - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
पास्ता40 मिनेट6 व्यक्ति
यो एक हो मनपर्ने खाना मेरो श्रीमान्बाट, राम्रो र मेरो पनि। यो गर्न धेरै सजिलो र छिटो छ र परिणाम ठूलो छ।
समावेश एक दिनदेखि अर्को दिनसम्म तिनीहरू धेरै धनी हुन्छन्। म प्रायः तिनीहरूलाई खानको लागि बनाउँछु, तर त्यहाँ सधैं बाँकी रहन्छ र मेरो श्रीमानले तिनीहरूलाई हप्तामा लैजानुहुन्छ (म काममा खान्छु र ऊ घरमा, कस्तो भाग्य!) र उनी भन्छन् कि तिनीहरू अझै धेरै राम्रो छन्।
La प्रामाणिक नुस्खा यसमा अण्डा छ तर यो संस्करण फरक छ अण्डा असहिष्णु लागि उपयुक्त। यो आधारभूत थर्मोमिक्स पुस्तकबाट हो।
धेरै रिच नतिजाको साथ एक धेरै सजिलो विधि।
टुक्राहरूमा 100 ग्राम बेकन
खाना पकाउन 500 ग्राम लिक्विड क्रीम
१०० ग्राम ग्रेटेड चीज़ (परमेसन वा हामीलाई जे पनि मनपर्दछ)
G० ग्राम बढी ग्रेटेड पनीर सेवा गर्दै गर्दा छर्कने काम
500 g स्पेगेटी
प्याला, माखन, तेल, बेकन र गिलास मा एक सानो मिर्च राख्नुहोस्। हामी बिग्रियो Seconds सेकेन्ड, गति at मा।
हामी ढक्कनमा र गिलासको पर्खालहरूमा स्प्याटुलाको साथ बाँकी रहेका अवशेषहरूलाई कम गर्छौं।
हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान र गति 7।
किसिमको चीज र क्रीम १०० ग्राम थप्नुहोस्। हामी बिग्रियो १ seconds सेकेन्ड, गति at मा र हामी कार्यक्रम १० मिनेट, तापक्रम १००º र गति।।
हामी यसलाई नुन चाहिन्छ कि भनेर हेर्न जाँच गर्छौं र यदि हामी थोरै थपेका छौं भने। हामी एउटा कचौरामा चटनी आरक्षित गर्छौं।
गिलास धोए बिना, 1500 ग्राम पानी, एक मुट्ठी नुन र जैतून को तेल जोड्नुहोस्। कार्यक्रम गर्छौं १० मिनेट, तापक्रम १००º र गति।।
समय पछि, हामी ढक्कन र कार्यक्रम को मुख मार्फत पास्ता थप्छौं समय स्पेगेटी प्याकेज (१०-१२ मिनेट) मा संकेत गरीयो, तापमान १००º र चम्चा गति।
हामी स्पेगेटी निकासी गर्छौं।
हामी बेकन स्लाइसहरू फ्राई pan पनमा फ्राई गर्दछौं वा जसो म गर्दछु, प्लेटमा हामी ग्रीसप्रुफ कागज राख्छौं, शीर्षमा बेकन स्लाइस र अर्को तरकारी कागज राख्छौं, माइक्रोवेभमा राख्छौं र power मिनेट अधिकतम पावर सेट गर्दछ, खोल्नुहोस् र हेर्नुहोस् यदि यो पहिले नै खस्ता छ भने, यदि हामी केहि मिनेटहरू राख्छौं।
हामी एउटा कचौरामा स्पेगेटीको सेवा दिन्छौं, यसको माथि तातो कार्बनारा सस, बाँकी पनीर पनीर छर्काउनुहोस् र क्रिस्पी बेकन स्लाइसहरू माथि वा वरपर राख्नुहोस्।
थप जानकारी - प्रामाणिक पास्ता कार्बोनारा थाहा पाउँदै
स्रोत - पुस्तक आवश्यक Thermomix® द्वारा
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: चामल र पास्ता, सजिलो, अण्डो असहिष्णु, १ घण्टा भन्दा कम
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » चामल र पास्ता » स्पेगेटी कार्बोनेरा
त्यो राम्रो देखिन्छ !!!!!!!!!!!
म तिनीहरूलाई परम्परागत तरिकामा अधिक मन पराउँछु तर मेरो पतिले उनीहरूलाई त्यस्तै मन पराउँछन् र म तिनीहरूलाई धेरै गर्छु।
ME ANGELES भन्यो
हेर्नुहोस कति राम्रो, आज के खानु भनेर मलाई थाहा थिएन र तपाईंले मलाई एक विचार दिनुभयो। धन्यवाद
मलाई आशा छ तपाईंले तिनीहरूलाई मन पराउनुभयो, ए एन्जलस। शुभकामना।
नमस्कार एलेना !!! मलाई इटालियन खानाको बारेमा धेरै थाहा छैन, तर मेरी बहिनी जो इरस्मसमा रोममा थिइन् (जसलाई तपाईंलाई पनि बोलाइन्छ) उसले उनको टाउकोमा हात राखी जब उसले मलाई यस्तो पास्ता तयार पार्दै गरेको देखी, कार्बोनेरामा केही छैन। मलाई! केवल अण्डा र पेन्सेटा ... राम्रो पक्षमा हेर्नुहोस्, शरीरको लागि कम क्यालोरीहरू!
Honeybunny लाई जवाफ दिनुहोस्
यो साँचो हनीबन्नी हो! मैले पहिले नै देखेको छु कि कसरी उनीहरू इटालीमा बनेका छन्। ठीक छ, म लाग्छ फारामहरू उत्कृष्ट छन्! म एक इटालियाली रेसिपी फेला पार्न जाँदैछु र यसलाई Th मा अनुकूल बनाउन कोशिस गर्दैछु, अब कसरी हेरौं उनीहरूले हेरौं!
अण्डा बिना हामीलाई नुसार दिनेका लागि धन्यबाद, किनभने सत्य यो हो कि घरमा हामी यसलाई तरल क्रीमको साथ मन पराउछौं (यद्यपि यो इटालेली इटालियन विधि होईन) मैले केवल थम्क्समा एकपटक स्पेगेटी कार्बोनेरा बनाएँ, बाँकी जहिले पनि भाँडोमा! !!
तपाईं यस नुस्खा Jessie मनपर्दछ! घरमा हामी उनीहरूलाई धेरै मन पराउँछौं र म प्राय: तिनीहरूलाई गर्छु, तिनीहरू पूर्ण देखिन्छन्। शुभकामना।
म इटालीमा बस्छु, र यो सत्य हो कि कार्बनारा अण्डाले तयार पारिन्छ, कि तिनीहरू वास्तवमा पिटेको अण्डाले बनेका हुन्छन् र यसलाई हावाबाट पास्टा हटाएपछि यसलाई राखिन्छ, यसलाई घुमाउनबाट रोक्न!
जे भए पनि, त्यसैले यो पनि महान छ। मलाई क्रीम र थोरै प्राकृतिक टमाटर वा फ्राइड सहित प्रयास गर्नुहोस्, थोरै ... यो रमाइलो छ !!!
धेरै धेरै धन्यवाद, मारिया! म तिनीहरूलाई अलि अलि बढी टमाटरको साथ प्रयोग गर्ने छु। शुभकामना।
मैले तिनीहरूलाई कहिले पनि बनाइनँ, तर म चाँडै नै तिनीहरूको प्रयास गर्छु।
तिनीहरू ... ummmmm जस्तै देखिन्छन्
म आशा गर्दछु तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ, Delfi! अभिवादन र हामीलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
उनीहरू कति राम्रो देखिन्छन्, म भोली उनीहरूलाई प्रयोग गर्छु। धन्यवाद
म आशा गर्छु कि तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ, मारीसोल, तपाईंले मलाई भन्नुहुनेछ। शुभकामना।
मैले भर्खर गरेँ !!
यो धेरै राम्रो छ, मेरो प्रश्न यो यदि यसलाई स्थिर गर्न सकिन्छ भने, मसँग प्रशस्त बाँकी छ तर मैले क्रीमको साथ कहिल्यै सास स्थिर गरिन। यो सम्भव छ?
नमस्ते एस्टेफानिया, तिनीहरू स्थिर गर्न सकिन्छ, तर तिनीहरूलाई डिफ्रोस्ट गरेर तताउँदा, बिस्तारै गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई थोरै तातो गर्नुहोस् ताकि क्रीम राम्रोसँग रहोस्। शुभकामना।
Toyy Monge भन्यो
मैले भर्खरै तिनीहरूलाई बनाएँ, तिनीहरू अति उत्तम देखिन्छन् तर मसँग दुईवटा डुडिलाहरू छन्, हामी दुई जनाले कम पास्ता पकाएका छौं, अर्को दिन सास स्थिर गर्न सकिन्छ। र अर्को तर्फ, यो माइक्रोवेभ बेकनको लागि एक उत्तम विचार जस्तो देखिन्थ्यो तर म जान्न चाहन्छु कि ग्रीसप्रुफ कागज आवश्यक छ कि छैन र तपाईं कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ।
सबै चीजको लागि धन्यबाद र ब्लगमा बधाई छ। यो मलाई मन पर्छ!!
Toñy Monge लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते तोइ, हो तपाई सॉस स्थिर गर्न सक्नुहुन्छ र तरकारी कागजहरू सबै सुपरमार्केटहरूमा उपलब्ध छन्। यसलाई ग्रीसप्रुफ कागज वा चर्मपत्र कागज भनिन्छ। म मर्काडोना मा किन्छु। तपाईं केहि कागज कागजातहरूको लागि यो कागज प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले लगभग or वा पाँच तल अनि अर्कोमा धेरै माथि राख्नुहुन्छ। अभिवादन र म धेरै खुसी छु कि तपाईलाई हाम्रो ब्लग मनपर्‍यो।
नमस्कार मैले आज यसलाई प्रयास गरेको छु र केहि कारणले गर्दा मैले पानी राखेको छु, ११०० ग्रामको साथ शीशा पहिले नै भरिएको छ। त्यसो भए मँ केवल २ 1100० ग्राम पास्ता राख्छु, तर जे भए पनि यो केहि फिर्ता आएको छ। मैले के गल्ती गरेको छु? मैले रकम जाँच गरेको छु र उनीहरू ठीक थिए भन्न सक्छन। तैपनि, तिनीहरू राम्रो भएको छ, सोस अलि तरल।
क्यान्डिडलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते सेन्डिदो, यो सामान्य छ कि जब पास्ता पकाइन्छ, जब सिसाको स्थानमा उमालेर, यो ओभरफ्लो हुन सक्छ। जब तपाईंलाई यो हुन्छ, गोब्लेट हटाउनुहोस् र जैतूनको तेलको स्प्ल्याश थप्नुहोस् र गोब्लेट बिना पकाउने जारी राख्नुहोस्। अर्को समय कस्तो हुन्छ मलाई भन्नुहोस्! यो कार्बोनरा नुस्खा स्वादिष्ट छ, साँच्चै। मलाई खुशी छ कि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो us हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
क्रिस्टिना क्याबनिलाहरू भन्यो
नमस्कार एलेना, यस महान ब्लगको लागि धन्यवाद, मैले भर्खर तपाईलाई खोजेको छु र म खुशी छु।
यो भाँडा एकदम राम्रो देखिन्छ, तर मसँग एउटा प्रश्न छ,
के तपाईंले बायाँ मोड लिनु हुन्न?
तपाईंको ध्यान को लागी धन्यवाद र तपाईंलाई चाँडै भेट्नुहुनेछ।
क्रिस्टिना क्याबनिलाहरूमा जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते क्रिस्टिना, बाँया पट्टि घुम्न आवश्यक छैन। तपाईं कसरी मलाई बताउनुहुन्छ। अभिवादन र हामीलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद। तपाईलाई हाम्रो ब्लग मन परेकोमा म खुशी छु
महान तर साँच्चै !!!!
कति जना मानिसहरूलाई पकाउने हो? किनकि मैले यो गरें र मैले यसमा धेरै पाएँ। धन्यबाद
पुरुषहरू थर्मामिक्सबाट पनि हुन्छन्
नमस्ते जोस मानुएल, हामी यसलाई एक डिशको रूपमा लिन्छौं र यो people व्यक्तिको लागि हो। मलाई खुशी छ कि तपाईलाई यो मन पर्यो। शुभकामना।
महान! तर मैले यो नुस्खा हल्का पार्न सानो परिवर्तन गरें र ती सफल भए: तपाईले देख्नुभयो, मैले वाष्पीकरण गरिएको दूध, आदर्श दूधको लागि क्रीम परिवर्तन गरें, र परिणाम विवादास्पद थियो। तपाइँलाई परिवर्तन गर्न को लागी प्रोत्साहित गर्नुहोस्, धेरै हल्का, र धेरै राम्रो स्वाद।
नुस्खाका लागि धन्यवाद, यो सजिलो हुन सक्दैन। चुम्बन
कति राम्रो, मारीन! म यो प्रमाणित गर्छु। शुभकामना।
मेरो श्रीमान्ले स्पेगेटी कार्बोनारा मन पराउनु भएको छ, जुन उसले सँधै टमाटरले खाएको छ। धन्यबाद केटीहरू, अब ऊ अधिक विविधता खान्छ र उसको आमाले उनलाई भन्छन कि उनी पातलो छ।
तपाइँ धेरै धेरै धन्यवाद ...
म धेरै खुसी छु, एलेनरेन!
अम्म्म्म ... कस्तो स्वादिलो ​​कुरा !!!! मैले भर्खरै भान्साकोठा उठाएँ जुन संयोगवश थर्मोमिक्सको साथ मैले एक प्लस प्लानमा समाप्त गरें, र मैले यो बिहान बनाएको छु जुन मैले आज बिहान देखेँ। मेरा व्यक्तिहरूले यसलाई मन पराए ... जस्तै उनीहरू आज राती वा भोली के खाने कुराको लागि झगडा गरिरहेका थिए। म कल्पना गर्छु कि यदि तिनीहरू यस समयमा खाईएन भने पनि तिनीहरू समान रहन्छन्, हो त? केवल एक चीज मैले परिवर्तन गरें सेरानो ह्यामको लागि बेकन, किनकि मेरो श्रीमान् बेकन मनपराउँदैनन्… र यो महान थियो। एउटा ठूलो चुम्बन र यसलाई राख्नुहोस् ...
नमस्कार एलेना !! मैले मसरोनीलाई सासको साथ बनाएँ, सत्य यो हो कि यो धेरै राम्रो छ तर यो धेरै तरल छ र मलाई सास अलि बढी मोटो चाहिन्छ ताकि पास्तामा राम्ररी भिज्यो। मैले के गलत गर्न सक्छु? फोटोमा चटनी बाक्लो छ। तपाइँलाई भन्नुहोस् कि म तपाइँको ब्लग संग खुसी छु।
राम्रो टिप्पणी डायना! तपाईंलाई धन्यवाद दिन बाहेक थप थप केही छैन। म धेरै खुसी छु कि तपाईंले तिनीहरूलाई यति धेरै hehehehe मन पराउनुभयो।
यदि यो for को लागि गरिन्छ भने मैले सामग्री अनुपातमा र समयहरू राख्छु?
म समय परिमार्जन गर्दछ तर म तिनीहरूलाई डबल छैन। म यसलाई निम्न अनुसार तयार गर्दछु:
प्याला, माखन, तेल, बेकन र गिलास मा एक सानो मिर्च राख्नुहोस्। हामी २० सेकेन्ड पीस गर्छौं, गति at मा।
हामी spatula संग काँधको पर्खालमा ढकनी र बाँकी रहेको अवशेषहरू कम गर्छौं।
हामी minutes मिनेट प्रोग्राम, varoma तापमान र गति २।
क्रीम र grated पनीर जोड्नुहोस्। हामी १ seconds सेकेन्डको लागि ग्राइन्ड गर्दछौं, स्पीड 15 र प्रोग्राम १० मिनेटमा, तापमान १०० temperature र वेग।।
बाँकी रेसिपीले उस्तै छोड्नेछ।
मलाई आशा छ यो तपाईंलाई राम्रो लाग्यो!
हो, यो बाक्लो छ, तर यदि तपाईंलाई यो हल्का मनपर्दछ भने तपाईं दूधको छप्पर थप्न सक्नुहुन्छ। मलाई मनपर्दछ, वास्तवमा, यो शनिबार हामीले यसलाई खानको लागि तयार गरेका छौं। स्वादिष्ट !!
नोएलिया रोचा सान्चेज भन्यो
मलाई कस्तो राम्रो भयो !!!!
Noelia Rocha Sanchez लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई यो क्लासिक नुस्खा मनपराएकोमा हामी खुसी छौं !!
म्याड्र मिया! मैले उनीहरूलाई केहि क्षणमा मात्र बनाइनँ र उनीहरू मायालु छन् !!!! मैले प्राप्त गरेको भर्खरको 500०० लिटर क्रेम, 350 ,० स्किम्ड दुधको OF XNUMX० स्केट दूधको साथ लिइएको छुनुहोस्। र ती त अझ धेरै प्रकाश भएका छन्… हाहाहाहाहाह।इन्सेराका लागि धन्यवाद
JANDRI लाई जवाफ दिनुहोस्
कस्तो राम्रो Jandri, हामी धेरै खुसी छौं! धेरै राम्रो प्रकाश अनुकूलन; पी
मैले विधि धेरै पटक बनाइसकेको छु तर यस पटकको चटनी त्यति मोटो थिएन, किन?
हुनसक्छ तपाईंले चीज वा क्रिमको ब्रान्ड परिवर्तन गर्नुभयो? यदि यो फेरि भयो भने, सासलाई लामो पकाउन दिनुहोस्, यसले क्रीमलाई वाष्पीकरण गर्न दिनेछ र सॉस गाढा हुनेछ। हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद! अंगालो
रेसिपीमा, स्पेगेटी xq थप्दा रिभर्स टर्न राख्नु आवश्यक छ यदि उनीहरू ज्यादा क्रश हुँदैन भने।
नमस्ते रूथ, पास्ता पकाउन बायाँ घुम्नु आवश्यक पर्दैन, तर यदि पास्ता नरम छ र पहिले खाना बनाउँदछ, सुरक्षाको लागि हामी पालोलाई देब्रेपट्टि राख्न सक्दछौं। Following हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
पास्ता र आलु gratin